Sangano reCouncil on Foreign Relations rekuAmerica Rotyira Mhirizhonga Munyika
Sangano reCouncil on Foreign Relations rinoti riri kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga sarudzo dzisati dzaitwa
Rimwe sangano rekuAmerica, reCouncil on Foreign Relations, rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vachinge vazobva pachigaro.
Sangano iri rinoti pane zvinhu zvishanu zvikuru zvisina kugadzikana apo nyika yatarisana nesarudzo, zvinoti nyaya yaVaMugabe yekuramba kudoma kuti ndiani achatora matomu, nekusagadzikana mubato reZanu PF.
Zvimwe zvinonzi zviri kunetsa kusabatana kwemapato anopikisa kuti aumbe mushandira pamwe wakasimba, kuramba zvinhu zvoenda kumawere munyaya dzezveupfumi, uyewo kuderera kwetarisiro yekuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinozogona kutora matanho ekudzivirira mhirizhonga munyika.
Panyaya yekunetsana muZanu PF, sangano iri rinoti kunyange hazvo vakuru vemauto nevasori vari kuita sevari kutsigira chikwata cheLacoste, icho chinonzi chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa muhondo yacho neG40, iyo inonzi inotsigira Amai Grace Mugabe, zvinonetsa kufembera kuti magumo acho akamira sei mukunetsana uku.
Sangano reCouncil on Foreign Relations iri riri kukurudzira kuti America itsvage nzira dzekudzivirira nadzo kusagadzikana pamwe nemhirizhonga muZimbabwe, uyewo kuderedza hudzamu hwedambudziko iri, kana richinge razoitika.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukumuru wesangano re Zimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisai Ruhanya vanoti havawirirane nezvose zviri kutaurwa nesangano iri.
Dorctor Ruhanya vanoti kunyange munyika kana mubato reZanu PF makanzi hamuna kugadzikana, havaone Zimbabwe ichipinda mudambudziko rakaita kutyirwa nesangano iri, vachiti hapasati pave nehumbowo hwekuti mauto kana vasori vangangokonzeresa kusagadzikana.
Vanoti havawirirane nesangano iri zvakare panyaya yekuti nyika dzakavakidzana neZimbabwe dzinogona kusave nematanho adzinotora kana makaita mhirizhonga, vachiti sangano reSADC rakatorakidza kare kuti rakagadzirira kugadzirisa matambudziko enhengo dzaro sezvarakaita muLesotho.
Doctor Ruhanya vanotiwo vanokurudzira masangano nenyika dzekunze, zvikuru dzekumawirira, kuti vasanyanye kuda kutaura nezveZimbabwe, asi kuti vazvisiire kunyika dzemuAfrica dzakaita saana South Africa.